पहिलो पटक गाउँपालिकामा विद्युतीकरण
२०७५ भदौ १७ आइतबार, म्याग्दी । म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–७ धारापानीमा गाउँपालिकामै पहिलो पटक केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत् विस्तार भएको छ । ... बाँकी अंश»
जनप्रतिनिधिबाट राजीनामा दिएर शिक्षिका बनिन् शाही
२०७५ भदौ १७ आइतबार, जाजरकोट । जाजरकोटमा एक जनप्रतिनिधि राजीनामा दिएर शिक्षिका बनेकी छिन् । गत वर्ष सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावमा वडा सदस्यमा निर्वाचित भएकी जुनिचाँदे गाउँपालिका–६ की गरिमा शाही राजीनामा दिएर शिक्षिका बनेकी हुन् । ... बाँकी अंश»
७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा प्रहरी सङ्गठन
२०७५ भदौ १६ शनिबार, काठमाडौं। नेपाल प्रहरीको सङ्गठन ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा विस्तार गरिएको छ। गत २०७५ जेठ २७ को सरकारी निर्देशनबमोजिम प्रहरी कार्यालय नभएका बाँकी ३० स्थानीय तहमा प्रहरी कार्यालय स्थापना गरिएको हो। ... बाँकी अंश»
२०७५ भदौ १५ शुक्रबार, स्याङ्जा । मेलमिलापको अवधारणा अवलम्वन गरेर हाम्रो समस्या हामै समाधान भन्ने नारा सहित वालिङ नगरपालिकाले नगरवासीलाई कानुनी शिक्षा सिकाउन शुरु गरेको छ । स्थानीय सरकार बनेपछि स्थानीय तहमा न्यायपालीका रहने व्यवस्था अनुसार नगरपालिकाले कानुन सिकाउन शुरु गरेको हो । ... बाँकी अंश»
कांग्रेसबाट जीतेका मंगलसेनका वडा अध्यक्षको जनप्रिय कामः शनिवार पनि सेवा दिने
२०७५ भदौ १५ शुक्रबार, अछाम। नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित अछामको मंगलसेन नगरपालिका वडा नं ६ का वडा अध्यक्षले शनिवार पनि जनतालाई सेवा दिने जनप्रिय निर्णय गरेका छन्। ... बाँकी अंश»
बाँसटारी-झडेवा सकड खण्डमा शंकास्पद वस्तु फेला
२०७५ भदौ १४ बिहिबार, पाल्पा । माथागढी गाउँपालिका ४ बोखरमा शंकास्पद वस्तु फेला परेको । विहिबार दिउँसो बासटारी झडेवा सकड खण्ड अन्तर्गतको बोखर स्थित सडकको भित्तामा शंकास्पद वस्तु फेला परेको हो । ... बाँकी अंश»
शहिदभूमीमा जनतामारा कर फिर्ता गर्न माग गर्दै कांग्रेसले बुझायो ज्ञापन पत्र
२०७५ भदौ १४ बिहिबार, धनकुटा । जनतामारा कर फिर्ता गर्न माग गर्दै बिहिबार धनकुटाको सहिदभूमी गाउपलिकामा नेपाली कांग्रेसले चर्को विरोध गर्दै र्‍याली सहित गई ज्ञापन पत्र बझुाएको छ । ... बाँकी अंश»
भीरबाट लडेर ताराको ज्यान गयो
२०७५ भदौ १४ बिहिबार, पाल्पा । पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिका वडा नं १ शिद्धेश्वरमा भिरबाट लडेर एक जना महिलाको ज्यान गएको छ । ... बाँकी अंश»
कांग्रेसका मेयर उपमेयर भिम पराजुलीको पक्षमा, कांग्रेस नेतृत्व भने अनिर्णित
२०७५ भदौ १३ बुधबार, काठमाडौं । नेपाल नगरपालिका संघमा नेपाली कांग्रेसले पठाउने व्यक्तिको टुङ्गो लगाउन नसक्दा महासचिव र अन्य पदमा को पठाउने अन्यौल कायम छ । ... बाँकी अंश»
घरले च्यापेर पाँच जनाको मृत्यु, एक बालिकाको जिवितै उद्दार
२०७५ भदौ १३ बुधबार, सल्यान । सल्यानमा मंगलबार राति घरले च्यापिएर एकै घरका पाँचको मृत्यु भएको छ । बागचौर नगरपालिका–४ सिमखोलीमा घर भत्किँदा एकै घरका पाँचको च्यापिएर मृत्यु भएको हो । एक जना घाइते भएका छन् । ... बाँकी अंश»
बीस घरपरिवारको यसरी भयो उठिबास
२०७५ भदौ १३ बुधबार, नेपालगञ्ज । बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका–२ कचनापुरका बासिन्दा राप्ती नदीबाट पीडित बनेका छन् । नदीले जग्गा कटान गरेर बग्ने धार परिवर्तन गरेपछि त्यस क्षेत्रका २० घरपरिवार विस्थापित भएका छन् । ... बाँकी अंश»
ठोरी गाउँपालिकाको गाडी सेनाको नियन्त्रणमा
२०७५ भदौ १२ मंगलबार, पर्सा। सडक मर्मतका लागि ठोरी गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने बागमोर्चा खोलाबाट गिट्टी बालुवा उठाउँदै गरेका डोजर सहित ट्रिपर र ट्याक्टरलाई नेपाली सेनाले नियन्त्रणमा लिएको छ । ... बाँकी अंश»
प्रधानमन्त्री ओलीकै जिल्लामा करको रकमबाट दर, महिलानै उत्रिए विरोधमा
२०७५ भदौ १२ मंगलबार, झापा। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जिल्ला झापामा नेकपाले जितेको भद्रपुर नगरपालिकामा जनताबाट उठाएको करले कार्यकर्तालाई दर खुवाउने कार्यक्रम राखिएपछि स्थानिय महिलाहरुले नै त्यसको विरोध गरेका छन्। ... बाँकी अंश»
गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिमा सुन्तला र कागतीको नाममा भ्रष्टाचार
२०७५ भदौ १२ मंगलबार, गुल्मी। रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नं. ६ मा सुन्तला र कागतीको नाममा भ्रष्टाचार भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वजेटमा सुन्तला र कागतीको विरुवा रोप्ने भनि १ लाख बराबरको रकम विनियोजित भएको थियो । विनियोजित रकम उपभोक्ता समितिले कुनै काम नगरी सबै काम गरेको भनि कृते कागज बनाई निकासा गरेको थियो । ... बाँकी अंश»
बालविवाह अन्त्यको लागि बालिका बिमा कार्यक्रम
२०७५ भदौ ११ सोमबार, बुटवल । बालविवाह अन्त्यको लागि रुपन्देही जिल्लाको गैडहवा गाउँपालिकामा बालिका बिमा अभियान सुरु गरिएको छ । ... बाँकी अंश»
नदीमा डुबेर बेपत्ता ३ बालकमध्ये एकको शव भेटियो
२०७५ भदौ १० आइतबार, लहान । सिरहा र धनुषाको सीमामा पर्ने कमला नदीमा डुबेर शनिबार साँझबाट बेपत्ता भएका सिरहाका तीन बालकमध्ये एक जनाको शव आइतबार बिहान फेला परेको छ भने दुई जना अझै बेपत्ता छन् । ... बाँकी अंश»
सन्की छोराको कुटपिटबाट बाबुको गयो ज्यान
२०७५ भदौ १० आइतबार, लहान । आफ्नै छोराको कुटपिटबाट गम्भीर घाइते सिरहाको लहान नगरपालिका–१८ मनर्वाका एक जनाको मृत्यु भएको छ । ... बाँकी अंश»
लुम्बिनी मेडिकल कलेजको गैरकानुनी काम, विश्वविद्यालयको अनुगमनमा नक्कली बिरामी भर्ना
२०७५ भदौ ८ शुक्रबार, पाल्पा। लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पाले बिहीबार नक्कली बिरामी भर्ना गरेर आफ्नो अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको भन्ने प्रमाण देखाएको छ। ... बाँकी अंश»
हलेसी नगरपालिकाको निर्णयमा सिडिओको हस्तक्षेप
२०७५ भदौ ७ बिहिबार, खोटाङ । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको निर्णयलाई उल्टाउँदै खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्रराज पौडेलले नगरपालिकाको निर्णयमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको पाईएको छ । ... बाँकी अंश»
नयाँगाउँमा सचेतनासहितको सहरी स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्र
२०७५ भदौ ७ बिहिबार, बुटवल । बुटवल उप–महानगरपालिका वडा नं. १२, नयाँगाउँ मिलनपार्क टोलमा सहरी स्वास्थ्य प्रर्वद्धन केन्द्र सुभारम्भ गरेको छ । पूर्वाधार विकास, प्रविधि तथा उपकरणको विस्तार र स्वास्थ्य सेवा विस्तारको कार्यक्रमलाई उपमहानगरले एकसाथ सुरु गरेको छ । ... बाँकी अंश»